Waraysi VOA: Aqoonyahan ceebeystay kooxdii ku shiray Kismaayo, sheegayna Xaqiiqda dantooda iyo Arin la yaab leh | Kalshaale
Waraysi VOA: Aqoonyahan ceebeystay kooxdii ku shiray Kismaayo, sheegayna Xaqiiqda dantooda iyo Arin la yaab leh
Oct 11, 2017 - 10 Aragtiyood
Kismaayo (Kalshaale) War-murtiyeed ka kooban illaa 16 qodob ayaa goor dhow laga soo saaray shirka Wadarashiga ee Kismaayo ugu socday Madaxda dowladda Goboleedyada kala ah Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Galmudug.
HALKAN KA DHEGAYSO WARAYSI VOA PROF. LIIBAAN CIISE
Dagaal oogayaal qabqablayaal aka horjoogayaal qabiil
yaamagac kele u yaqaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Malafsi& maaxan Cunaa kkkķk gaas weersho hoogaan uah
inader cadaaladu way fiicantahay maxaad gaas keligi u maagi waa iskuwda mide
hakala reebine wada karbaash
Dee Madaxwayne may doortaan.
Saldhiga Turkiga ayay arintani ku saabsan tahay.Emaaraatka ayaa raba inay dawladii meesha ka saran.Waa sheeko sucub oo hadda biloow ah.Laakiin waa iska socda oo aan melena xakumin intooda badan.
Qabiilo ayay matalaane ma matalaan Somaliya.
Haddii aadan fahmin haddalada sarbeeban ee ninkaan u ololeynjirey Federaal Fitno uu ula jeedo, waxaaba laga yaabaa iney soo dedejiso Qalalaaso maamul goboleedyada oo ayagu noqdaan ninkii Qabrigiisa qotey.
– Means: waa arintaan shaley sheegahayey ee aheyd in Dowladdu magacowdo REGIONAL COORDINATOR.
Goobweyn to Buulo Xaawo
Hiiraan kala bar
Sool iyo Sanaag maba soo dhawaan.
— Maxey ku nuugtaa ama ka nuugtaa.
Feysal Waraabe ayaa horey u sheegey Tuulooyin la xaajoon meyno.
Qabiilka ayaa dhulka degan ee dameero iyo adhi ma degana.
Soomaalida ayaa lagu arkay dad dhihi aqoonyahan ayaa hadlay iyada oon la cadeynin waxa uu aaminsanyahay.
Ninku ma federaldiid baa mise mise waa qaran doon.
Adduunka kale waxaa la isdhahaa waa liberal ah oo nama quseeyo fikirkiisu ama waa nin conservative ah oo nama quseeyo wuxuu leeyahay iyo Ideologies ka uu aaminsanyahay.
Madaxweyne Abdiweli Gaas wuxuu qaadayaa:
Shantaan nin waa daanyeero. Waxaa kaloo daanyeero ah kuwa qabiil dartood taageersan, oo aananba u jeedin maslaxadda iyo qaranimada sovereinty madaxbanaanida Somaliya sida eey ugu ciyaarayaan shantaan daanyeer.
Waxaase eeda ugu darran iska leh, madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare Kheeyre, oo uu Abdiwali Gaas, hogaamiyaha Garoowe, uu galiyay dowladda dhexe go’doon siyaasadeed kii ugu qatarsanaa ilaa iyo intii la dhisayay dowladahii isku xigxigay ee taagta darnaa.
Madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare Kheeyre, waxeey cabsi darteed ku hormareen in maamuladii Galmudug iyo Hirshabeel (hoogamiyahii hore Cosoble) oo ahaa kuwa ka dhaganugul maamulka Garoowe, in eey burburiyaan, kadibna eey u soo jeestaan maamulka mahbarka ah ee Garoowe, hooyada Federalka in eey burburiyaan ugu dambeeyn. Iyaga oo bilaabay qorshaha oo qeeyb kamid ah strategy yadaad labilaabay, si dagdagna regime change loogu sameeyay Hirshabeele, Galmudugna la’isku dayay, laakiin, sidii larabay noqon. Puntland na, ladoonayay in ninka Labaad ee maamulkaas hogaamiya Cameey laga horkeena ninka Koowaad, Mr. Gaas, laakiin, little birdie, shimbir yar ayaa dhagta wax ugu sheegtay Mr. Gaas, waana kaas uu kaga hormaray move, dhaqaaqa, goal na ka dhaliyay dowladda dhexe. Waa inqilbaab siyaasadeed oo lagu sameeyay dowladda dhexe, kadib qaab darro iyo siyaasad xummo owgeed, eey ku dhaqmayeen dowladda dhexe ragga hogaamiya.
Mushkilada Somaliya waa tan; Fiiriya, Khaatumo hanoolaato oo Dhulbahante ah, ayaa dhahaya Amaaleey, maxaad Gaas kaligiis u maagi. Yacni, ninkaan Dhulbahante ee Khaatumo Hanoolaato, waxuu diyaar u yahay in uu difaaco ninkaan Majeerteen ee Gaas. Isaga, oo aanan fahamsaneeyn waxa eey Amaal u tilmaameeysa Gaas, amaba aan anniga gooni u maagaya Gaas, sababtaas oo ah, in uu Gaas yahay ninka soo karkariyay maraqaan, oo uu yahay hooyadii Federaalka.
Sidaa Khaatumo hanoolaato uu ugu dagaalamayo difaacida Majeerteeka, ayaa qabiilo badan ugu dagaalamaan Majeerteenka. Xataa marmar waxaa kor u soo qaada markii eey sii liicayaan hogaamiyayaasha Majeerteenka xataa argagixisada alshabaab.
Majeerteenku waa barakeeysanyahiin ayaad is dhihi mararka qaarkood.
Khatuma hanolato walal maamulada koonfur IYO dowlada ismadiidane maska madaxiisa waxuu yalaa garowe aka gaas inaad garatan filaa